အရှုပ်တော်ပုံများကြောင့် အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရသည့် K-PoP လောကရဲ့အမျိုးသမီး Idol ၃ ယောက် | News Bar Myanmar
အရှုပ်တော်ပုံများကြောင့် အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရသည့် K-PoP လောကရဲ့အမျိုးသမီး Idol ၃ ယောက်
K-Pop Idol တွေဆိုတာကတော့ လူအများရဲ့ မျက်စိထောက်တောက်ကြည့်ခြင်းကို ခံနေရတာပါ။ အရှုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ခေါင်းပြန်ထောင်နိုင်ဖို့က မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ Member တစ်ယောက်သာ ပြသနာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အဖွဲ့ကိုပါ ထိခိုက်ပါတော့တယ်။ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့် အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ့် အမျိုးသား Idol တွေကတော့ ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထတော့ နည်းပါးသော်လည်း အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ရတဲ့ အမျိုးသမီး Idol တွေလည်းရှိပါတယ်။
1. Dahee ( GLAM အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း)
၂၀၁၄ ခုနှစ်က GLAM ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Dahee နဲ့ မော်ဒယ်လ် Lee Ji Yeon ဟာ မင်းသား Lee Byung Hun ကို ငွေညှစ်တဲ့ ပြသနာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Dahee နဲ့ Lee Ji Yeon ဟာ Lee Byung Hun မှ ပိုက်ဆံမပေးပါက မင်းသားရဲ့ Sexual Jokes များပြောခဲ့သည့် Video များတင်မည်ဟုဆိုကာ ငွေအများအပြားတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ထောင်နန်းစံခဲ့ရပါတော့တယ်။ Dahee ဟာ ဒီပြသနာကြောင့် အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီး GLAM အဖွဲ့ဟာလည်း မကြာခင်မှာပဲ အဖွဲ့ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
2. Hyuna ( Triple H) အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း)
Hyuna ဟာ Cube Entertainment မှာ ရှိခဲ့စဉ်က Pentagon ရဲ့ Hui, Dawn တို့နဲ့အတူတူ Triple H အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Dawn နဲ့ Hyuna တို့ရဲ့ Dating rumor ထွက်ခဲ့တဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ Cube ဟာ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် Dawn နဲ့ Hyuna တို့ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ Dating ကို ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့်ပဲ Cube Entertainment မှ Hyuna နဲ့ Dawn တို့နှစ်ဦးလုံးကို ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပီး Hyuna လည်း Triple H အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
3. Hwayoung (T-ara အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း)
ဒီအရှုပ်တော်ပုံကတော့ K-Pop လောကရဲ့ အကြီးဆုံးအရှုပ်တော်ပုံထဲမှ တစ်ခုပါ။ သူမဟာ T-ara အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ အပယ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ T-ara အဖွဲ့ဟာ ဘယ်လိုပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ ငြင်းပယ်ခဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူအများအပြားကတော့ ကောလဟလကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ပြီး T-ara အဖွဲ့ကိုသာ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် T-ara အဖွဲ့ဟာ အပြစ်တင်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့နေရာဟာလည်းအလိုလို ပျက်သုန်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီကောလဟာဟာ အမှားဖြစ်အကြောင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ်တော့ Hwayoung ကသာ မကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Next ဟန်ဆိုဟီးတစ်ယောက် ထောင်နန်းစံရမည့်အပေါ် တောင်ကိုရီးယားလူထု၏အမြင် »
Previous « India နိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို စော်ကားတယ်လို့ အပြောခံခဲ့ရသည့် Blackpink ရဲ့ How You Like that